विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक सिंहदरबारमा शुरु — Imandarmedia.com
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक सिंहदरबारमा शुरु
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक सिंहदरबारमा शुरु भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेबाट निस्काशित नेता माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी छन् ।
संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका नेताहरू गठबन्धनको आन्तरिक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका हुन् ।
एमालेबाट निष्काशनपछि नेपालले मुख खोले, कसलाई के भने हेर्नुहोस अपिल सहित ?
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूसहित ११ नेतालाई नेकपा एमालेबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुमाथि निष्काशन गरेर एमालेलाई तहसनहस गर्ने अभियान पूरा गरेको उनले बताएका छन् । नेकपा एमाले केपी ओली समूहबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कारबाहीलाई औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा निवास बोलाउने, विदेशी दूतले पटकपटक भेट्ने आदि समाचारहरु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको बताएका छन् ।